उर्जामन्त्रीको कर्के नजर, सुनको जलपमा पत्थरको व्यापार « हाम्रो ईकोनोमी
उर्जामन्त्रीको कर्के नजर, सुनको जलपमा पत्थरको व्यापार
केही दिन अघि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री बर्षमान पुन तामझामसहित गृह जिल्ला रोल्पा पुगे । माघी तथा खेलकुद महोत्सवको उद्घाटन गर्न रोल्पा पुगेका मन्त्री पुनले दिएको अभिब्यक्तिलाई उनको सहयोगी टिमले ब्यापक प्रचार प्रसार पनि ग¥यो । उनको भनाई थियो, रोल्पामा सुन, तामा, र सिङ्गमर्मरखानी रहेकाले निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उनको यो भनाई आएपछि दुई प्रकारले तर्क गर्न थालिएको छ ।
एउटा हो, के रोल्पामा बहुमुल्य खानी छ ? भएको भए उत्खनन गर्दा राम्रो हुनेछ । अर्को तर्क छ, बहुमुल्य खानी उत्खननको नाममा रोल्पामा केही वर्ष यतादेखि मौलाइरहेको चुन ढुङगा, गिट्टी बालुवा लगायतका खानी तस्करीमा कुनै प्रश्न नउठाउन बहुमुल्य खानी उत्खननको नाम दिन खोजिएको त होइन ? अर्थात मन्त्री पुनका नजिक रहेको भन्दै केही ब्यक्तिहरुले गर्दै आएको खानीको तस्करीमाथि कतैबाट पनि प्रश्न नउठोस भनेर सुनको नाम दिईएको बताईएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार रोल्पाबाट दैनिक ९० ट्रक भन्दा बढी चुन ढुङगा तस्करी हुने गरेको छ ।
रोल्पाका स्थानीय नेता गंगाप्रसाद घर्ती र राप्ती माइनिङका प्रेम पुनले चुनढुङ्गा तस्करी गरिरहेको तथा त्यसलाई मन्त्री पुनको सचिवालय टिमका सन्तोषले सेटिङ मिलाउने गरेको घट्नासँग मन्त्री पुनको अभिब्यक्तिलाई जोडन थालिएको छ । उनीहरुले बुढागाउँबाट तस्करी गरेको चुन ढुङगा, दाङको घोराही सिमेन्ट उधोगमा बेच्दै आएका छन् ।
गंगाप्रसाद र प्रमेले कपुरकोटसम्म ल्याएको चुनढुङ्गासुरेश हमाल र मोहन बस्नेतले चाजोपाजो मिलाउदै घोराही सिमेन्ट सम्म पु¥याएर बिक्री गर्ने गरेको यस अघि नै सार्वजनिक भई सकेको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रोल्पामा चुनढुङ्गा तस्करी गरेको भनेर उजुरी परे पनि यही टिमको दबाबमा हालसम्म कसैलाइ पनि कारबाही भएको छैन । रोल्पाको चुनढुङ्गाबाट उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तरीय हुने बताइन्छ । त्यही भएर रोल्पा र दाङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मौलाएको व्यवसाय हो, खानीको दोहन । जसमा चुनढुङ्गा, गिटी, वालुवालगायत छन ।
यो काममा मन्त्री पुनको संरक्षण रहेको भनेर प्रशासनयन्त्रमा चर्चा चल्ने गरेको छ । यही चर्चा चलिरहेको बेला आएको उनको अभिब्यक्तिले तरंग पैदा गर्नु स्वाभाविकै हो । यदी रोल्पामा बहुमुल्य खानी उत्खनन गर्ने नै हो भने पनि यस्ता तरंग चिर्न आबश्यक देखिएको छ । यो काम मन्त्री पुनबाट पक्कै पनि हुनेछ ।
के रोल्पामा सुन छ ?
रोल्पामा सुन रहेको चर्चा चल्न थालेको चार दशक पुग्न लागेको छ । चौतीस वर्षअघि ०३९ सालमा नै रोल्पाको लुङ्गीखोला बगरमा भएको सुनखानीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ भनेर एक प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । मरिचमान सिंह श्रेष्ठको पहलमा तयार गरिएको सो प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस, तेल, युरेनियम, धातु, खनिजहरु, तामा, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने अर्ध किमती र किमती पत्थरहरु खोज्ने कार्य भैरहेको प्रयत्न सह्राहनीय भए पनि देशको अवस्था अनुसार आर्थिक अवस्था मजबूत गर्न र विकास उद्योगको उन्नतिका लागि साथै विदेशी मुद्राको बचत गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने खानीको अनुसन्धानमा ठूलो रकम छुट्याएर होस् वा विदेशी कम्पनीहरुलाई सुरुमा काम गराएर हुन्छ, खोजी कार्य तीब्र गर्नुपर्दछ भनिएको थियो । तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दिलबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको विकास समितिले सम्बन्धित विभाग, कार्यालय र संस्थानका प्रमुख र पदाधिकारीहरुसहितको छलफलपछि त्यसलाई मूर्त रुप दिएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
सरकारले ३१ वर्ष पहिले रामनगिना यादवको नेतृत्वमा गरेको खोज तथा अनुसन्धानबाट पूर्वी, मध्य र पश्चिम नेपालका चुरेपर्वत क्षेत्र तथा तराई मधेसका कतिपय स्थानमा युरेनियमलगायत बहुमूल्य खनिज रहेको पत्ता लागेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९८७ मा कृष्णप्रसाद काफ्लेको नेतृत्वको टोलीले मध्यक्षेत्रको कमला नदीदेखि बाग्मती नदीसम्म, मकवानपुरको तीनभंगाले र चाँदीखोलाका केही स्थानमा समेत युरेनियमको खानी रहेको भनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
नेपालका विभिन्न जिल्लामा तीन दशकअघि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राटिष्ट्रय भूगर्वविद् तथा विज्ञहरुको संलग्नतामा खनिजको सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि त्यसको बिस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन । रोल्पा जिल्ला र त्यस वरपरको क्षेत्रमा सुनको खानी छ भन्ने धेरै चर्चा चल्ने गरेको छ । त्यही चर्चा अनुसार नेपालमा सुन खोज्न आएका चिनियाँहरु पटक–पटक रोल्पा पुगेर फर्केको बताइन्छ ।
खानी तथा भूगर्व विभागले चुनढुङ्गा उत्खननकालागि ५४ वटा लाइसेन्स प्रदान गरेकोमा त्यसमा नौवटा कम्पनीलाई सुन उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको समाचार स्रोतले बतायो । रकम लेनदेन र ठूलो चलखेल हुने खानीको लाइसेन्सको बिषयमा अधिकारीहरु धेरै बताउन चाहदैनन् । सरकारले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनले नेपालमा २१ धातु खनिज, २३ औद्योगिक खनिज, ६ किसिमका रत्न खनिज, ९ किसिमका निर्माणजन्य खनिज रहेको देखाएको थियो । त्यसमा रोल्पाको पनि नाम समावेश छ ।
विभागसँग यस्ता खानी अन्वेषण तथा अध्ययन गर्न चाहिने नयाँ तथा नवीन प्रविधि तथा प्राविधिक र परीक्षण गर्ने गतिलो प्रयोगशाला नभएको कारण पनि बिदेशीहरु आकर्षित हुने गरेका छन । तर उनीहरुले के अध्ययन गरे र त्यो अध्ययन रिपोर्ट कहाँ पेश गरे भन्ने बिषयमा विभागकै अधिकारीहरु नै जानकार छैनन् । मन्त्री पुनले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सुनखानी उत्खनन गर्ने कुरालाई पनि त्यस्तैसँग जोडन चाहनेको कमी छैन ।
आशा लाग्दा तर, निकै विवादमा आएका नेतामा पर्छन बर्षमान पुन । उनी तत्कालिन एमाले र माओबादी पार्टीको चुनाबी तालमेल देखि सरकार गठनसम्मका घटनाक्रमले उनी निकै बिबादमा छन् । गृह मन्त्रालय ताकेका पुन प्रधानमन्त्रीको अनिक्षाका कारण उर्जामा पुगेकाले उनी निकटष्थहरु अहिले सरकारलाई नै खुईल्याउनमा ब्यस्त छन् । उनको लगानी समेत भएको भनिएका कतिपय संचार माध्यमहरुको खेती नै प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्नु रहिआएको छ ।
यस्तो अवस्थामा यतिबेला फेरि गृह जिल्लाकै तस्कर उनी मुछिएका छन् । मन्त्री पुनको आडमा, राप्ती माईनिङ कन्ट्रक्सनले बषौदेखि त्रिबेणी गाउँपालिका बुढागाउँबाट चुन ढुङगा तस्करी गरिहेको बताईन्छ । दैनिक ९० ट्रक भन्दा बढि चुन ढुङगा तस्करी गर्न । तत्कालिन माओबादीको तर्फबाट त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार गंगाप्रसाद घर्तीले स्थानीयबासीलाई थामथुम पार्ने काम गरिरहेका छन् । अध्यक्षमा पराजित भएपछि गंगाप्रसादको तस्करी धन्दा सुरु भएको र त्यसमा राप्ती माइनिङका प्रेम पुनले गुण्डा परिचालन गर्ने गरेका छन् ।
उनीहरुले बुढागाउँबाट तस्कर गरेको चुनढुङ्गा, दाङको घोराही सिमेन्ट उधोगमा लिएर बेच्ने गरेका छन् । गंगाप्रसाद, प्रेमले सेटिङ मिलाउदै कपुरकोटसम्म ल्याएको चुनढुङ्गा काँग्रस निकट सुरेश हमाल र बैंकका कर्मचारी मोहन बस्नेतले चाजोपाजो मिलाउदै घोराही सिमेन्टसम्म पु¥याउने गर्दछन् ।
राप्ती माईनिङ कन्ट्रक्सनले खानी बिभागबाट अनुमति नलिएको भएपनि मन्त्री पुनकै दवावमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रोल्पा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा र त्रिबेणी गाउँपालिकाले संचालनमा सहयोग गरिरहेको बताईएको छ । गाउँपालिकालाई प्रति टिपरको तीन सय राजश्व बुझाएको देखाउने गरिएको छ ।
मन्त्री पुनका पीए सन्तोषले राप्ती माइनिङका सञ्चालकबाट मोटो रकम बुझ्ने गरेकोे स्रोतको दाबी छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा चुनढुङ्गा तस्करी गरेको भन्ने धेरै उजुरी परेको भएपनि त्यसतर्फ कारबाही अगाडि बढाए तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा हुने भएकाले उनीहरु नेखेको नदेखै झैं गर्ने गरेका छन् ।
०६६ सालमा स्थापना भएको रोल्पा सिमेन्ट प्रालि बुढागाउँमै रहेको छ । उक्त सिमेन्टले दिनहु ५ सय बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको छ । तर, त्यहाँको चुन ढुङगाबाट उत्पादन भएको सिमेन्ट गुणस्तरिय भएको थाहापाएपछि घोराही सिमेन्टले तस्करहरु प्रयोग गरेरआफु कहाँ ल्याउन लगाएको स्रोतले बतायो । पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । विना सूचना झ्यापझ्याप वत्ति जान थालेपछि अहिले इन्भर्टर किनबेच बढिरहेको छ । यसो हुनुका पछाडि इन्भर्टर व्यापारीले मन्त्री पुनलाई प्रयोग गरिरहेको त छैनन् भन्ने आशंका गर्न थालिएको प्रकाश खबरले जनाएको छ ।